InfluencerActive: mitadiava mpanelanelana B2B mora foana amin'ny fampielezana fampielezana Influencer manaraka | Martech Zone
Zoma, Martsa 19, 2021 Zoma, Martsa 19, 2021 Douglas Karr
Androany, nanatevin-daharana mpanentana B100B 2 mahery aho tamin'ny fanombohana ny Influencer Mavitrika. Ity no tsena dizitaly influencer voalohany an'ny B2B ho an'ny marika B2B na B2C hahitana sy hanakaramana mivantana ireo influencer. Ny tsena fitarihan-tena manerantany dia tsy manam-paharoa satria mampifandray ireo mpivarotra marika amina influencer mahery vaika izay nanangana laza manaraka sy azo itokisana amin'ny fantsona maro samihafa. Ny orinasa dia natsangan'ny Anthony James ("AJ"), izay efa manana traikefa ara-barotra efa ho 30 taona izao ary izy koa dia influencer fanta-daza manana mihoatra ny Mpanaraka 2 tapitrisa ao amin'ny LinkedIn.
Fanamby iray ny fitadiavana influencer
Ho an'ny mpivarotra manerantany, ny fahitana ny influencer mety hampiakarana ny marika sy handoavana ny sarany takian'izy ireo dia efa olana teo amin'ny marketing influencer, indrindra ho an'ny SMB. Ary koa, ny marika B2B dia voafetra amin'ny fidirana amin'ny marketing influencer ary matetika miankina amin'ny lahatsoratra na dokam-barotra tohana, izay mety ho lafo sy tsy mandaitra. Ny fitomboan'ny fandaniana manan-danja dia vinavinaina amin'ny marketing influencer, fa ny fitadiavana ny influencer mety dia mety ho fanamby ho an'ny orinasa.
Ny Influencer Active dia afaka manampy amin'ny familiana ny fiatraikany amin'ny alàlan'ny fanomezana anao toeram-pivarotana ho an'ny daholobe voan'ny influencers vetivety izay azo sivana mora. Ny lampihazo:
Manome ny mombamomba ny influencer ary koa ny fanatiny - miaraka amin'ny vidiny mangarahara.
Ny influencers dia afaka manome tolotra izay misy resaka, fampisehoana virtoaly, ezaka amin'ny marketing amin'ny atiny, fampiroboroboana ny haino aman-jery sosialy, na saika zavatra rehetra hatolony.
Manatsotra ny fizotran'ny mpivarotra B2B mba hahitana ny influencer mety amin'ny indostria mitsangana havanana amin'ny fomba lafo vidy kokoa hanohanana ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny gen-lead sy ny marika.
Manome demaokrasia amin'ny fidirana amin'ny influencers ary manome fomba egaliter kokoa hidirana sy hidiran'izy ireo any amin'ny firenena 11, Etazonia, Azia-Pasifika ary Eropa. Manolotra ambaratonga voalohany mitambatra olona 30+ tapitrisa ary mahatratra 150+ tapitrisa ny isan'ny tambajotra - isa izay mitombo isan'andro.
Manolotra fifandraisana mivantana avy amin'ny mpivarotra isaky ny influencer ary dingana tsotra amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny fampielezana varotra hampitomboana ny fiatraikany.
Manolotra faritra iray fitomboana vaovao ho an'ny indostria MarTech amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo influencer amin'ny orinasa (B2B) amin'ireo mpividy B2B. Taloha, ny influencer B2B dia tsy afaka nanao varotra ny tambajotran'izy ireo noho ny fameperana ny LinkedIn, ary ny fomba tokana ahafahan'ny influencer iray mitaona ny LinkedIn dia amin'ny alàlan'ny tolotra efa misy toa ny drafitra InMail. Ny lahatsoratra tohana ao amin'ny LI dia lafo sy tsy mahomby.
Ny tsara indrindra dia tsy misy saram-pisoratana anarana na mila mandefa fanazavana fohy navoakan'ny mpanelanelana iray. Ny fifamofoana dia mivantana eo amin'ny orinasa sy ny influencer, ary misy ny vidiny raha toa ka manaiky ny hiditra ny influencer.
Jereo ny mombamomba ahy sy ny tolotra ataoko ao amin'ny InfluencerActive
Tags: database base influencer b2btsenan'ny influencer b2binfluencer b2bmitadiava influencer b2bmahita ny influencerstahiry influencerinfluenceractive